Looks Nepal | » नक्साको हुंकार कहिले सम्म ? जमिन फिर्ता ल्याउ Looks Nepal नक्साको हुंकार कहिले सम्म ? जमिन फिर्ता ल्याउ – Looks Nepal
May, 21, 2020	looksnepal
चीन र रसियाबीच भूमि विवाद छ, चीन र भारतका बीच भूमि विवाद छ, भारत र पाकिस्तान बीचमा झन् बढी भूमि विवाद छ, बंगलादेश र भारत बीचमा पनि भूमि विवाद छ। नेपालसंग पनि नेपालको ७२ ठाउँमा भारतले नेपालको भूमि मिचेको भूमि विवाद छँदैछ।
सबैले विवादित भनिएका भूमि आआफ्नो मुलुकको नक्सामा देखाएकै छन्। नक्सामा कसले कति भूमि कहिले देखाउछ त्यसको कुनै अर्थ छैन, कसको भूमि कस्को कब्जामा छ त्यो मुद्दा मूल हो। टाउको दुखेको जति राम्रो औषधी नाईटोमा लगाएर रोग निको पार्दैन। नक्सामै मूतको न्यानो लिनु भनेको उल्लु बनिसकेको हुनु हो।
ठोस कुरा भूमिको स्वामित्व तत्कालै लिनु हो। नक्सा बनाईनुबाट भूमि विवाद समाधानमा कुनै माने राख्दैन। नक्सा महिना महिनामा जसले जे राखी नराखी छापिरहँदा हुन्छ। भारतले वर्षेनी नयॉ नयॉ नक्सा छापिरहेकै छ। नेपाललाई त नक्सा-फक्सा किन चाहियो र? नेताहरूको खल्ती र गिदीमा छापिएकै हुनेगर्छ। नेताका फुत्त महाबाणी निस्केपछि कुरै खलास्, पररर् ताली आईहाल्छ, जाडोमा मूतको न्यानो केही सेकण्डका लागि भए पनि पाईहालिन्छ, गर्नुधर्नु केही पर्दैपर्दैन।
काम पो गर्ने हो, नक्साको गफले झिंगो मर्दैन। नक्सा काण्ड जनतालाई उल्लु बनाउने अस्त्र नबनोस्, जनता क्षणक्षणमा सजक, सतर्क र जागरूक भइरहनुपर्छ। नभए विगतमा यिनले गरिआए वा गरेझैं नेपाललाई क्रमण विदेशीको पाउमा चढाउदै जानेछन्।
मुहान तय नगरीकनै महाकाली नदी पाउमा चढाएर बॉदरलाई लिम्पियाधूरा, लिपुलेक, कालापानी कब्जा गरिरहन लिस्नो बनाइदिने तिनै राजनीतिक पात्रहरू नै अहिले MCC मार्फत मुलुक कसैको पाउमा चढाउन कम्मर कसिरहेकै छन्। किस्ता किस्तामा मुलुक परायाको पाउमा चढाईदै छ। होसियार रहौं, नभए नेपाली जनताले आजसम्म कुकुरले नपाएको दु:ख झेलेर पुस्तौपुस्ता नारकीय जिवनको अर्को तलामा बास बस्न अभिशप्त हुनुपर्नेछ। त्यसैले सरकार नक्साको हुंकार कहिले सम्म ? जमिन फिर्ता ल्याउ ।